Minatomiraiဟာ Kanagawa ခရိုင်ရဲ့ date spotMinatomiraiဟာ Kanagawa ခရိုငျရဲ့ date spot | wafulu
Minatomiraiဟာ Kanagawa ခရိုင်ရဲ့ date spotMinatomiraiဟာ Kanagawa ခရိုငျရဲ့ date spot
Kanagawaခရိုင် Yokohamaမြို့မှာရှိတဲ့ Minatomiraiဟာ Kanagawa ခရိုင်ရဲ့ date spotဖြစ်ပါတယ်. ညရှုခင်းက လှပပြီး လူငယ်တွေကြိုက်တဲ့နေရာ ဖြစ်ပါတယ်. အနီးနားမှာ တရုတ်ဟင်းလျာတွေ စားသောက်လို့ရတဲ့ ဈေးတန်းကြီးရှိပါတယ်.
Kanagawaခရိုငျ Yokohamaမွို့မှာရှိတဲ့ Minatomiraiဟာ Kanagawa ခရိုငျရဲ့ date spotဖွဈပါတယျ. ညရှုခငျးက လှပပွီး လူငယျတှကွေိုကျတဲ့နရော ဖွဈပါတယျ. အနီးနားမှာ တရုတျဟငျးလြာတှေ စားသောကျလို့ရတဲ့ ဈေးတနျးကွီးရှိပါတယျ.
The Minatomirai area in Yokohama City, Kanagawa Prefecture isadate spot in Kanagawa Prefecture. Night view is beautiful, so it is popular among young couples. Nearby there isacity street where you can eat authentic Chinese cuisine.
« စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတဲ့Serotoninက Zen meditation စိတျကိုတညျငွိမျစတေဲ့Serotoninက Zen meditation
Sagaခရိုင် Imariမြို့ရဲ့ Doccyanပွဲတော်Sagaခရိုငျ Imariမွို့ရဲ့ Doccyanပှဲတျော »